Kambani yedu ndeimwe yemafekitori akakura muChina anogadzira marori echikafu nematura echikafu.Kambani yedu iri muShanghai, China, uye fekitori yedu iri muNantong, China
Ko matrailer ako echikafu anozadzisa zviyero zvenyika yedu here?
Tichagadzira nekuvaka matrailer zvinoenderana nezvinodiwa nenyika dzakasiyana.Kana uine chero zvakakosha zvinodiwa, ndapota usazeza kutizivisa.
Saizi, chitarisiko uye ruvara rwetirairi yako yechikafu zvingagadziridzwa here?
Hongu, izvi zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvako.Kuti uone kusarudzwa kwedu kwakazara kweanowanikwa mavara palettes, ndapota shanya Www.ralcolor.com uye tizivise zvaunofarira zvemavara.
Unogona here kuisa chiratidzo nekudhinda logo yangu kana magiraidhi parori yechikafu kana kugadzirisa ruvara?
Ehe.Tinogona kugadzirisa ngoro yechikafu trailer kune chero ruvara rwesarudzo yako.Zvakare, isu tinokwanisa kudhinda nyore logo yako kana magiraidhi parori yechikafu kana tangogamuchira iyo artwork kubva kwauri.
Unotakura sei matrailer echikafu?
Turera yechikafu haidi kuparadzanisa muviri, matai chete.Zvidhoma zvidiki-diki zvechikafu zvinoda kurongedzerwa mumabhokisi emapuranga, uye matura ehombe echikafu anoda 20ft kana 40ft midziyo yekufambisa.Nzira yekufambisa ndeyemugungwa.Nyika dzakasiyana dzine mitengo yakasiyana yekutakura uye nguva dzekufambisa.
Munotakura matrailer kuenda kunyika yedu here?
Hongu, ndapota tipe zano nemutsa kuti ndeipi chiteshi chaunoda kuendesa kwairi, isu ticha tarisa iyo nyowani yekutumira mutengo wekutarisa.
Ndedzipi nyika dzawakambotumira kune dzimwe nyika?
Takanga tatumira kuEurope (UK, Germany, Belgium, Poland, Italy, France, Romania, Spain, Switzerland, Czech Republic etc.)
Asia: UAE, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Japan, Malaysia, nezvimwe.
Ndeapi mazwi ekubhadhara kwerori dzekudya dzakagadzirwa-tsika?
Kune mirairo-yakavakirwa-yakavakirwa, 50% yekubhadhara pasi inodiwa uye chiyero chinobhadharwa usati watumirwa.
Ndeapi marudzi emidziyo uye midziyo yemukicheni iripo?
Mhando dzakasiyana dzematrailer echikafu ane zvinoenderana nemidziyo, midziyo yemukicheni, nezvimwe.
Kazhinji pane zvikamu zvitatu.1. Chikafu trailer accessories.2. Gasi midziyo yekicheni.3. Refrigeration kitchen midziyo
Ndapota taura nesu kuti uwane quotation yazvino
Ndeapi macertification ayo turera yako yechikafu inopfuura?
CE, ISO, VIN.Pamusoro pezvo, matrailer ese atinovaka akagadziridzwa kuti anyatso kusangana uye kuomerera kune yega yeHurumende uye yemunharaunda hutano uye zvinodiwa.
Ndeipi nguva yako yekuchinja uye yekutumira?
Mushure mekugamuchira dhipoziti yako, tinogona kutanga kugadzira yako odha.Iyo nguva yekugadzira ingangoita 5 ~ 7 mavhiki, uye nguva yepamusoro yekuraira ichawedzerwa nemavhiki mashoma.Nguva yekutumira inoenderana nekwauri kuenda.Ndapota tibvunzei kune yakatarwa nguva yekutumira.
Sei zvakachengeteka kutenga kubva kwauri kune vamwe?
Isu tinopawo kugadzira zvibvumirano zviri pamutemo zvekutenga kuitira kuti uve nechokwadi chekuti tichaunza maererano nezvibvumirano zvedu.Isu tinopa kambani maakaundi ekubhengi uye inotungamirwa neChina Customs.Zvese zvekutengesa homwe zvinofanirwa kuve nehumbowo hwekutumira.Asi haufanirwe kunetseka chero chero nguva sezvo tichange tichikutumira zvigadziriso nemifananidzo nemavhidhiyo ekugadzirwa kwetirailer yako uye nekutumira magwaro sehumbowo.
Isu tinopa akawanda akavimbika nzira dzekubhadhara, kusanganisira kuendesa kubhengi, www.wise.com kubhadhara kwepamhepo, nezvimwe.
Unogona kubvunza bhanga rako nezve mabhadhariro epasi rese, uye isu tinogonawo kukupa mavhidhiyo ekubhadhara pa www.wise.com
Unobvuma paypal pay?
Iyi ndiyo fekitori yese yeChinese haigone kutsigira paypal kubhadhara, paypal kubhadhara kwakakodzera e-commerce nzvimbo (senge eBay, Amazon, nezvimwewo), uye zvigadzirwa zvinogona kutumirwa nemhepo.Matrailer edu echikafu ese akagadzirwa uye anoda kuti vatengi vabhadhare dhipoziti odha vasati vagadzirwa.
Chii chinonzi warranty policy?
Isu tinopa makore gumi waranti pamatiraire edu uye ese emidziyo yekubikira uye nemidziyo yekuwedzera inotengeswa navo seaddons.